Akwụkwọ akụkọ Anna Bredava na Martech Zone |
Edemede site na Anna Bredava
Anna Bredava bu onye okacha amara nke Social Media na Awario. Ọ na-ede banyere ịre ahịa dijitalụ, usoro mgbasa ozi mmekọrịta, obere azụmaahịa na ngwaọrụ ndị na-enyere onye ọ bụla nwere mmasị ịzụ ahịa aka.
Ngwaọrụ nlekota oru iri iri n’enye n’onwe gi ka inwere ike bido n’efu
Monday, April 5, 2021 Monday, April 5, 2021 Anna Bredava
Ire ahia bu oke ihe omuma nke na mgbe ufodu o nwere ike buru oke. Ọ dị ka ịkwesịrị ịme ihe nzuzu n'otu oge: chee echiche site na usoro ịzụ ahịa gị, chepụta ọdịnaya, lekwasị anya na SEO na mgbasa ozi mgbasa ozi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. O di nwute, enwere mgbe obula iji nyere anyi aka. Ngwaọrụ ire ere nwere ike iburu anyị ibu ma gbanye akụkụ na-agwụ ike ma ọ bụ nke na-atọ ụtọ
Fraịde, Ọgọstụ 17, 2018 Thursday, August 16, 2018 Anna Bredava
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ọhụụ ọhụrụ maka ndị ọkachamara n'ahịa n'ụwa niile. N'adịghị ka nkwenkwe oge ochie, ahịa mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịba uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla - ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ puku afọ ma ọ bụ ọgbọ X, ndị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị nwe nnukwu azụmaahịa, ndị na-edozi ma ọ bụ ndị prọfesọ kọleji. Tụle eziokwu ahụ bụ na e nwere ihe dị ka ijeri 3 ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi n'ụwa niile, ị nwere ike ikwu na ọ nweghị ndị ga-achọ